Ny AirPods dia mbola ho headphones amidy indrindra amin'ny taona 2018 | Avy amin'ny mac aho
Ary io dia efa nolazaintsika efa ela fa nahita ny fanalahidy marina amin'ireo finday tsy misy tariby ireo i Apple. Ireo headphones natolotra tamin'ny Septambra taona lasa 2016 ary izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy teny an-tsena tamin'ny volana desambra tamin'io taona io ihany, dia manohy izy ireo ankehitriny ho iray amin'ireo vokatra Apple revolisionera indrindra amin'ny fanajana ny iPhone.
Ny AirPods dia manohy manangona tarehimarika fivarotana mahavariana ary araka ny filazan'ilay mpandalina fanta-daza Ming-Chi Kuo an'ny KGI Securities, ireo headphone ireo dia hahatratra isa avo lenta kokoa amin'ny taona manaraka 2018.
Ary izany tokoa mora be ny mampifandray ireo headphones ireo amin'ny Mac, Apple Watch, iPod na iPhone antsika, fa tsy azo atao ny manao ratsy. Ankoatry ny habeny, ny rafitra tsy maintsy ampiasain'izy ireo ary ny boaty fitaterana dia manampy ny bateriny manokana hamenoana ny headphones raha ilaina, ataovy mpivarotra tena tsara ity vokatra ity. Ny fanambaràn'i Apple ao amin'ny tranonkalany dia manazava amin'ny fomba tsotra sy voafintina izay azonao atao amin'ireo headphone ireo:
Esorinao hiala amin'ny tranga izy ireo ary efa miasa miaraka amin'ny fitaovanao rehetra izy ireo. Napetrakao izy ireo ary nanomboka nilalao teo noho eo izy ireo. Miteny ianao ary re mazava tsara ny feonao. Toy izao ny AirPods: ny fahatsorana sy ny teknolojia tafaray amin'ny headphones izay majika madio
Avy amin'izany rehetra izany no sisa tavela amin'ilay fehezan-teny hoe: «ny fahatsorana sy ny haitao tafaray anaty sofina» zavatra iray izay tena marina ary azo antoka fa ho tratranao fanitsiana vitsivitsy toy ny famahanana tsy misy tariby tsy misy tariby ivelan'ny boaty amin'ny headphone, amin'ny fahombiazan'ny tarehimarika iray hafa tamin'ny taona 2018 ary efa voalazan'ny mpanadihady, Kuo.
Ny olana lehibe amin'ireo AirPods ireo dia ny fahazoana hatrany, ankehitriny miaraka amin'ny tahiry azo antoka kokoa dia afaka milaza isika fa ity taona ity dia tena tsara tamin'ny resaka varotra Ary raha tsy diso ny vinavinan'i Kuo dia misy resaka eo anelanelan'ny 26 sy 28 tapitrisa unit ho an'ny 2018. Ho hitantsika raha marina izany na tsia amin'ny faran'ny taona manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » AirPods dia hijanona ho sofin-tsofin'i Apple be mpividy indrindra amin'ny taona 2018